Khilaafkii ugu xooganaa oo Ahlusunnada gobalada dhexe soo kala dhex galay iyo dowlada oo sheeda kala socota. | warsugansomaliya.wordpress.com
Maamulka Ahlusunna ee gobalada dhexe ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf aad u balaaran kaas oo salka ku haya hanaanka hogaaminta maamulka iyo deegaanada uu ka arimi jiray qaarkood oo xilligaan diidaya in ay kasii hoos shaqeeyaan maamulka.
Wararka laga helaayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobalka Gal-guduud ayaa waxa ay sheegayaan in barqanimadii maanta uu halkaasi ka dhacay kulan ay yeesheen masuuliyiinta Ahlusunna inkasta oo ay hareeyeen khilaaf salka ku haya dib u eegis lagu sameeyo hogaanka maamulkaasi oo in badan oo kamid ah uu ka dhamaaday xilligii loo igmaday iyada oo sidoo kale khilaafka hareeyay uu kamid ahaa degmooyin cadeeyay in ay ka bexeen kasii hoos shaqeynta maamulkaasi.
Deegaanada diiday in ay ka hoos shaqeeyaan Ahlusunna ayaa waxaa kamid ah Caabud waaq iyo Balanbal iyada oo laga cabsi qabo in Guri-ceel iyana ay dhawaan ku dhawaaqdo in ay ka baxday xeyndaabka Ahlusunna.
Masuuliyiin Ahlusunna ku leh saameyn ayaa waxa ay soo jeediyeen in la bedelo masuuliyiinta xilalkoodu dhamaaday iyada oo arintaasi ay ka caga jiideen masuuliyiin kale oo aan ku qanacsaneyn wax ka bedelka maamulka.
Dhanka kale, dowlada Soomaaliya ayaa waxa ay sheeda kala socotaa arinta Ahlusunna iyada oo la’aaminsanyahay in dowladu ay aad ugu riyaaqeyso bur-burka urur diimeedkaasi oo caqabad ku ah hanaanka geedi socodka dowladnimo ee dalka.
Dhawaan ayaa maamulka Ahlusunna ee gobalada dhexe waxa ay diideen gudoomiye cusub oo dowladu u magacaawday gobalkaasi Gal-guduud iyaga oo sheegay in aan iyaga la gala tashan magacaabistiisa deegaanadaasina uusan ka howl geli Karin masuul aan iyagu raalli ka aheyn.
Si kastaba dowlada Soomaaliya ayaa waxa ay aad ugu riyaaqeysaa urur kasta oo aan dowl aheyn burur ku yimaada si ay maamulka dalka ugu kali noqoto.
Maamulka Barre Hiiraale oo ka hadlay warar sheegayay in uu kulamo la qaatay saraakiil Shabaab ah (Top News).
Heshiiska laga dhax wado Dowlada Somalia iyo Maamulka Axmed Madoobe Maxaa Hormar ah oo kasoo bixi kara?
← Fawzia Yusuf Hajji Adam oo Maanta Shiinaha u duushay iyo Xog ku aadan Ujeedka Socdaalkeeda
Arin layaab badan: Gudoomiye Taszan oo fara gashaday astaanta qaranka dalbadayna in la bedelo →